Teknolojia | Oktobra 2021
Fomba Fanamboarana Asa Sy Vola Drafitra Sy Torohevitra Fahalalana & Fanabeazana Haingo Fitness Diy Tsy Maintsy Jerena Levitra Gynaec
Ity no antony ilàn'ny ray aman-dreny trondro rehetra hampiasa vola amin'ny aquarium marani-tsaina
Sokajy Teknolojia 2021
Mitadiava trano tsara indrindra ho anao biby fiompy anaty rano miaraka amin'ny aquarium trondro marani-tsaina izay afaka miantoka fiainana tsara sy azo antoka ny biby fiompinao.
Fitaovana marani-tsaina 5 ilainao amin'ny zavamaniry ao anaty anao
Ento ireto fitaovana ilaina amin'ny fanaovana zaridaina manan-danja ireto izay hanampy ny zavamaniry anaty trano hitombo tsara rehefa tsy eo ianao!
Printer 5 ambony ampiasaina amin'ny trano any India
Ireo no mpanonta pirinty tsara indrindra eny an-tsena hampiasaina ao an-trano any India izay mifanaraka amin'ny tetibola. Ireo no mpanonta tsara indrindra eny an-tsena hampiasaina ao an-trano any India a
5 Tsy maintsy manana gadget ho an'ny fampiasan-tena ao an-trano
Atombohy amin'ny fanamarihana sahaza ireto ny taonanao miaraka amin'ireo izay tsy maintsy misy gadget mba hanatsarana ny asanao amin'ny fanatanjahan-tena any an-trano.
Fitaovana elektrika an-dakozia ambony hananana
Mitsitsia fotoana sy ezaka amin'ny alàlan'ny fitaovana an-dakozia mandeha amin'ny herinaratra vaovao izay nanamora ny fiasan'ny lakozia rehetra.
Smartwatches lehibe 5 hampiasa vola
Ny famantaranandro marani-tsaina dia mety ho fananana sarobidy amin'ny fahasalamanao sy ny famokarana anao. Ity misy lisitra azonao isafidianana.
Fitaovana tokony hanananao mba hanampiana amin'ny fanadiovana ny fitafianao
Omeo fikarakarana fanampiny sahaza azy ny fitafianao. Ireo fitaovana ireo dia hanadio ny akanjonao nefa tsy manasa azy.
Antony tokony hampiasanao vola amin'ny fitoerana misy herinaratra.
Ireo no antony ilainao hampiasa vola amin'ny fatana elektrika ho an'ny trano malalanao. Ireo no antony ilainao hampiasa vola amin'ny fitoeran-jiro elektrika ho anao
Kitendry Wireless na Kitendry tariby?
Izahay dia nasaronay anao tamin'ny fijerena feno ny pitsopitsony mba hanampiana anao amin'ny fanapahana hevitra eo amin'ny fitendry finday tariby sy tariby
Akanjo marani-tsaina izay tsy azonao hadinoina
Ny fitafiana manan-tsaina dia fandrosoana ara-teknolojia lehibe izay nanamora ny fiainana tamin'ny teknolojia nohavaozina
eBooks: vahaolana amin'ny vanim-potoana vaovao ho an'ireo tia boky.
Raha tianao ny mamaky sy mivezivezy dia vahaolana lavorary ho anao ny eBooks. Ento ao amin'ny telefaoninao, takelaka, mpamaky e-izy ary vakio isaky ny tianao izany
Zavatra tokony hodinihina alohan'ny hividianana monitor zaza
Ny fanaraha-maso ny zaza dia fitaovana tsotra nefa tena ilaina izay manampy anao hitazomana ny zaza mandritra ny efitrano hafa. Fantaro ireo zavatra ireo alohan'ny hividianana iray
Ahoana ny fomba hampijanonana ireo mailaka Spam sy hanaparitahana ny Inbox anao indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Fantatsika rehetra ireo hafatra manelingelina, tsy ilaina ary mety hampidi-doza ireo, fa ny tena tianay ho fantatra dia ny fomba fampijanonana ny mailaka spam tsy hanenika ny boaty fampidirana ary hahatonga antsika ho adala.
Tsy nieritreritra ny hampiasa takelaka mihitsy aho mandra-pahatongako ny tanako amin'ny Amazon Fire HD 10
Ny eritreritra ny hividy takelaka dia tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy mandra-pitsapako ny Amazon Fire HD 10. Ity ny famerenako marina sy ny antony tokony handinihanao ny mividy iray.
Fantatro fa efa antitra aho, fa inona kosa no dikan'ny BAE?
Efa nijerijery ny telefaonan'ny tanora ve ianao? Toy ny kaody sovietika izy ireo - manana ny fanafohezan'izy ireo ny zava-drehetra. Jereo ny dikan'ny bae sy ny fanafohezana Internet hafa.
Amazon dia manana fifanarahana AirPod 4 lehibe mialoha ny andro lehibe
Vonona ny hampiakatra ny feo? Ireto karazana 4 Apple Airpods samihafa ireto dia amidy mialoha ny Amazon Prime Day.
Meloka ve ianao amin'ny 'fihoarana'? Ity ny tena dikan'izany
Ny teny hoe extra dia toa manana fahefana mijanona matotra, koa ity no dikan'izany indray mandeha sy ho an'ny rehetra.
Ity ny dikan'ny hoe flleek, indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Nahazo fanafohezana Internet ve ianao? Saingy mbola tsy azonao an-tsaina izay lazain'ny tanora antonony. Ity misy torolàlana ho an'ny teknolojia tsy mitombina.
Ahoana ny fomba hampiantranoana antoko Santa miafina virtoaly izay tsy loza mitatao atahorana
Hainao? Nandeha an-tserasera i Secret Santa tamin'ity taona ity ary nametraka torolàlana mora ampiasaina izahay mba hiantohana ny fahombiazan'ny antoko Santa miafina ataonao fa fahombiazana tanteraka (fa tsy loza mitarika fitarainana).
Google dia manana endrika izay ahitanao ny fomba ahatongavan'ilay alika nofinofinao (na dinôzôro) ao an-tranonao
Ny endri-biby 3D an'ny Google dia mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny AR (augmented reality) avy amin'ny finday avo lenta mba hahazo sary mitovy habe amin'ny fomba mety amin'ny zava-drehetra ao an-tranonao ny zava-drehetra manomboka amin'ny retriever volamena ka hatramin'ny Velociraptor.
lisitry ny sarimihetsika fianakaviana anglisy
sarimihetsika romantika indrindra Hollywood
haircuts malaza ho an'ny vehivavy
sakafo rantsan-tànana ho an'ny fety
tantaram-pitiavana sarimihetsika any Hollywood
volo nokapaina ho an'ny vehivavy